Shiinaha SPC Dabaqa SM-020 Soo-saar iyo Warshad | Dheeraad ah
SPC sagxadda dhulka waxaa iska leh mashiinka wax lagu duubo oo ay weheliso T-nooca caaryada extrusion PVC substrate, oo leh seddex rollers ama afar rollers oo mashiinka rogid ah lakabka xirashada PVC, midabka midabka PVC iyo substrate-ka PVC, hal-kuleyl ku habboon kululeynta, alaabada la soo saaray, shuruudaha habraacuna aad ayuu u sare, ku habboon kuleylka si aad u dhammaystirto, uma baahnid xabagta.
Qalabka sagxadda SPC iyadoo la adeegsanayo qaaciddada bey'adda u fiican, oo aan lahayn biro culus, phthalate, methanol iyo walxo kale oo waxyeello leh, iyadoo la raacayo heerarka GB4085-83.
Gogosha SPC waxay caan ku tahay wadamada horumaray iyo suuqyada Aasiya ee Baasifigga ee Yurub iyo Mareykanka. Iyada oo ay leedahay waxqabadkeeda waxqabad wanaagsan ee deegaanka SPC sagxadda dhulka kaliya ma xallinayso dhibaatada alwaax adag oo caaryada ah ee qoyaan-u-qaloocinta, laakiin sidoo kale waxay xallisaa dhibaatada rasmiga ah ee qalabka kale ee qurxinta.
Rakibaadda waa mid fudud, dhisme ku habboon, uma baahnid inaad ku dhufato keel alwaax ah, dhulku uma baahna inuu sameeyo daaweyn aan biyuhu lahayn, uma baahna geeddi-socodka dhismaha ee adag, badbaadi waqtiga rakibidda iyo kharashka. Dildilaac la'aan, ballaarin la'aan, cillad la'aan, dayactir iyo dayactir la'aan, fududahay in la nadiifiyo, keydso dayactirka iyo kharashka dayactirka. Saamaynta nuugista dhawaaqa waa wanaagsan tahay, keydinta tamarta waa wanaagsan tahay, kuleylka wareejinta kuleylka degdegga ah wuu wanaagsan yahay, sidaa darteedna tamarta gudaha waxay keydineysaa in ka badan 30%.
Midab leh, ka dooro noocyo kala duwan oo midabyo ah, noocyo kala duwan. Filimka sagxadda SPC iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada daabacaadda qeexitaanka sare, waxay si buuxda u soo bandhigi kartaa diirimaadka iyo jilicsanaanta sagxadda alwaax; Muuqaalka dhulka SPC qaabka sagxadda dhulka ayaa aad hodan u ah, hadey tahay qaabab caan ah oo alwaax iyo dhagax ah iyo qaabab kale oo caan ah, ama hadda xilligii "Buddhist", dhammaanteen waan ixtiraameynaa qaabka dabiiciga ah, waa lagu qanci karaa.
Hore: Dabaqa SPC 207
Xiga: SPC Dabaqa SM-021